July 2019 - BaHuThuTaGabar
ဂရန်အတု.. ဂရန်အစစ်… လွယ်ကူစွာခွဲခြားနည်း..
ဂရန်အတု.. ဂရန်အစစ်… လွယ်ကူစွာခွဲခြားနည်း ဂ ရန် အတု ဂရန်အစစ် အား အောက်ပါအချက်များဖြင့် ခွဲနိုင်ပါသည် ဂ ရန် မျက်နှာဖုံးက သားရေအစိမ်းရင့်ပါ တွန့်ကြေခြင်း မရှိပါ ဌာနတံဆိပ်မှာ ရွှေရောင် လက်နှင့်ပွတ်ကြည့်လျင် ကြမ်းပြီး ဖောင်းကြွ ဖြစ်ပါတယ် အိုးအိမ်ဂရန် မှာ အပြာရောင်ပါ […]
“ဆရာဇင်ယော်နီ၏ ဇူလိုင် (၁၇ မှ ၂၃) ရက်ထိ တပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း”
“ဆရာဇင်ယော်နီ၏ ဇူလိုင် (၁၇ မှ ၂၃) ရက်ထိ တပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း” မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ အထိ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံး […]
“တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀မှာတော့ မသိပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် အချက် (၅)ချက်”
အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာရင် အိမ်ထောင်ပြု၊ သားသမီးယူပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀လေး တည်ဆောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေး လူတိုင်းမှာ ရှိကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုရင် သင်ထင်ထားတာနဲ့ အများကြီးကွာဟနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀မှာတော့ မသိခဲ့ပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုရင် ကြုံတွေ့လာရမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါပြီနော် (၁)အချစ်တွေပျောက်ဆုံးလာမယ် ရည်းစားဖြစ်စအချိန်တွေမှာ […]
“ချစ်တဲ့သူကို သတိရရင် မေတ္တာပို့ပေးလိုက်ပါ”
ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက် အေးချမ်းပါစေ။ ဘးအန္တာရယ်တွေက ဝေးပါစေ။ စိတ်မဆင်းရဲ ပါစေနဲ့။ ခန္ဓာ့ဆင်းရဲကို မခံစားရပါစေနဲ့။ လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ပါစေ။ ကြံစည်တိုင်း ဖြစ်ထွန်းပါစေ။ လူမိုက်တွေ ရန်က ဝေးပါစေ။ သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာ ဆုံတွေ့ပါစေ။ စတဲ့ မေတ္တာတွေ ပေးပို့လိုက်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြန်ဆုံးယာဉ်ဟာ စိတ်ဖြစ်သလို ခွန်အားအကြီးဆုံးကလည်း […]
“ရန်ကုန် မြင်သာ ကညနဝန်းအတွင်းက ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများ”
ရန်ကုန် မြင်သာ ကညနဝန်း အတွင်းက ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုများ ကျွန်​​တော်​ရဲ့ Alphard 3H/3417 ကား သက်​တမ်းတိုးဖို့ မြင်​သာကညနရုံးကို​ ရောက်​​နေပါတယ်​ ပွဲစားနဲ့ မလုပ်​ပါနဲ့ ပိုင်​ရှင်​ကိုယ်​တိုင် ​​ဆောင်​ရွက်​ပါလို့ နိုး​ဆော်​​နေပါတယ်။ ယာဉ်​စစ်​သည့်​အခါ​ မော်​​တော်​ကားတိုင်းကို ဝိုက်​ဘာဖြုတ်​ခိုင်းပါတယ်​. ကိုယ့်​ မှာဘာမှမပါ​တော့.. ဖြုတ်ပေး​နေတဲ့​ ကောင်း​လေး​တွေကို. ၃၀၀၀ကျပ်​​ […]
အလှူလုပ်နေရင်း သဒ္ဒါကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်မိလို့ အမြဲဆွဲနေကျဆွဲကြိုးက လော့ကတ်သီးကို ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင် အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာ ထာဝရကျန်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင်ဟာဆိုရင် လက်ရှိမှာ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝ လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စဖွယ်သမီးလေး သုံးယောက်နဲ့အတူ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ အေးချမ်းသာယာတဲ့ဘဝလေးမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူလည်း သူမကိုဂရုစိုက်ပြီး ချစ်ပေးတာကြောင့် […]
မူကြိုဆရာမလေးသတ်ခံရမှု မိသားစုရဲ့ပြောပြချက် ကော့ခပုံက မူကြိုဆရာမလေးသတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများနှင့် စခန်းမှူးတို့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူ မူကြိုဆရာမလေး မချမ်းဟာ ရိုးသားအေးချမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို တခြားသူတွေနဲ့ စီးပွားရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ ငွေရေးကြေးရေးအရ ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေးမရှိပဲ ဆရာမအလုပ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်တစား ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဒေါ်လာနဲ့ (၃)နှစ်လောက် […]
အမြန်လမ်းမှာ ကားပျက်တာကို မကူညီတဲ့အပြင် ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေပါတောင်းတဲ့ ရဲ(၂)ဦးကို အရေးယူပြီ.. အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်. ၃၁၁/၃ အနီးတွင်. မော်တော်ယာဉ် ပျက်ရ်ျ အခြားယာဉ်တစီးဖြင့်. ဆွဲလာသည်ကို. အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ ဝင်(၂) ဦးမှ ထိုသို့ယာဉ်ဆွဲ ယူခြင်းသည် အမြန်လမ်းမကြီး ဥပဒေအရ […]
ဘော်ဒီအမိုက်စားတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖို့ Gym အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတဲ့ နေတိုးတို့အဖွဲ့ ဗီဒီယို
ဘော်ဒီအမိုက်စားတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖို့ Gym အပြင်းအထန်ဆော့နေတဲ့ နေတိုးတို့အဖွဲ့ ဗီဒီယို ကျနော်တို့ မြင်တွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားရအောင် စနစ်တကျ လေ့ကျင်ယူပြီးမှာ ရိုက်ကူးလေ့ရှိတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိထားပြီးသားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစဉ်အလာအရ ဒီလို ပြင်ဆင်မှုမျိုးဟာ ရှားပါးတယ် လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုကျနော်တို့ […]